११ बर्षिया बालिकालाई फ्रुटी दिएर बलात्कार पछि जलाएको पुष्टि, यि हुन अपराधी ‘हाम्ली डन’ ! – On Khabar
February 19, 2019 February 19, 2019 onkhabar	Comment(0)
७ फागुन, धनुषा
धनुषाको मिथिला-३, मगर टोलमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ११ वर्षीया बालिका रेश्मा भनिने दुतिया रसाइलीको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
धनुषाको बटेश्वर-४ बस्ने ‘हाम्ली डन’ भनेर चिनिने निरज जर्घामगरलाई घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि २ फागुनमा मगर टोलमा बिहान साढे १० बजे उखुबारीमा नग्न अवस्थामा जलेको शव फेला परेको थियो । बोल्न नसक्ने अपाङ्गता भएकी बालिका रसाइलीको शव भेटिएलगत्तै प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
लगत्तै, संकित व्यक्तिको खोजतलास गर्ने क्रममा भारतीय सीमा क्षेत्रमा लुकिछिपी भाग्न लागेको अवस्थामा दुहबी टोलबाट मगरलाई पक्राउ गरिएको प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डिआईजी हरिबहादुर पालले बताए ।
पक्राउ परेपछि प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा उनले थप चार जनाको नाम लिएर सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको बताएका थिए । तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले नाम लिएका व्यक्तिहरुको संलग्नता नरहेको खुलेको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
मगरमाथि जबरजस्तीकरणी गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
बिहेबाट बालिकालाई फकाएर लगे, हत्यापछि बिहेमै फर्किए
पक्राउ परेपछि प्रहरीलाई उनले सुरुमा झुक्याउने कोशिश गरेका थिए । अन्य व्यक्तिको पनि नाम लिएर प्रहरी अनुसन्धानलाई मोड्ने प्रयासमा उनी थिए । तर, अन्ततः प्रहरी घटनामा उनको मात्र संलग्नता रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
उनले प्रहरीलाई पछिल्लो पटक दिएको बयानका क्रममा फिंगर प्रिन्ट लगायतका सबुत मेटाउन शव जलाएको बताएका छन् । अनुसन्धान अधिकारीहरुका अनुसार मगर विभिन्न चोरीका घटनामा यसअघि पनि संलग्न थिए ।
उनी युवतीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय, ढल्केबरको हिरासतमा समेत बसेको देखिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालिमाटीले पनि उनीविरुद्ध सार्वजनिक कसुरको मुद्दा चलाएको छ । उनी सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा दुई महिना जेल सजाय भुक्तान गरेर निस्किएको प्रहरीको भनाइ छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार उनको आमाले बुबालाई छोडेपछि बुबा भारतमा गएर लेबर काम गर्ने गरेको छन् । आमाले अर्कै विवाह गरी काठमाडौंमा बस्दै आएको खुलेको छ । त्यसयता उनी काठमाडौं, जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा बस्ने गरेका थिए भने उनी कहिले पेन्टर, कहिले सवारी साधनमा खलासी त कहिले लेबरको काम गर्ने गरेको देखिएको छ ।
Spread the love अनखबर फागुन ४ काठमाडौं लोकगायक पशुपति शर्माले बिहीबारमात्र सार्वजनिक गरेको गीत शनिबार नै हटाएका छन्। ुलुट्न सके लुट कान्छाु बोलको व्यंग्यात्मक गीतमा प्रयोग भएका शब्दमा सरकारी पक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि उनले सो गीत हटाएका हुन्। उनले आफ्नै युट्युब च्यानलमा उक्त गीत सार्वजनिक गरेका थिए। तर शनिबार हटाउने अवस्थामा पुगेका हुन्। सरकारी स्कुलमा जागिर […]
Spread the love कृष्णको सहयगोको याचना अनखबर पौष २५, रुकुम – रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका–९ सिम्लीका कृष्ण ओली विद्युत प्राविधिक हुन्। आफ्नो घर खर्च सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिकको रुपमा कार्यतर उनी विगत ७ महिनादेखी थला परेका छन्। कृष्णका अहिले दुवै हात र बायाँ खुट्टा छैन्। २१ वर्षीय कृष्णको अनुहारमा झट्ट हेर्दा निकै स्वस्थ्य देखिन्छन्। तर […]
प्रजातन्त्र दिवसकै दिन दीपकराज जोशीले किन दिए राजीनामा ?
यस्तो बन्नेछ, बुटवल उपमहानगरपालिकामा अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स !